MB 2016 Desambra - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran'izao tontolo izao
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Desambra
Isan-taona amin'ny faha-25. Desambra, ny Kristianisma dia mankalaza ny nahaterahan'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, naterak'i Maria Virjiny. Tsy manome fanazavana momba ny daty nahaterahana marina ny Baiboly. Tsy tamin’ny ririnina angamba ny nahaterahan’i Jesosy rehefa nankalaza izany isika. Nilaza i Lioka fa nanome baiko ny Emperora Aogosto fa tsy maintsy nosoratana tao amin’ny lisitry ny hetra ny mponin’ny tontolo romanina manontolo (Lioka 2,1) ary “dia samy nankany amin’ny tanànany avy izy rehetra mba hosoratana anarana”, anisan’izany i Josefa sy i Maria, izay bevohoka (Lio 2,3-5). Misy manam-pahaizana milaza ny andro nahaterahan’i Jesosy tamin’ny fiandohan’ny fararano fa tsy tamin’ny ririnina. Saingy na oviana na oviana marina ny andro nahaterahan'i Jesosy, dia tena mendrika ny hankalaza ny fahaterahany.
Ny faharoa5. Ny volana Desambra dia manome antsika fahafahana hahatsiaro fotoana mahafinaritra iray teo amin’ny tantaran’ny olombelona: ny andro nahaterahan’ny Mpamonjy antsika. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Kristy dia tsy mifarana amin'ny tantaran'ny Krismasy. Isan-taona tamin’ny fiainany fohy, izay nifarana tamin’ny fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny niakarany tany an-danitra, dia nandany ny andro nahaterahany teto an-tany i Jesosy. Niara-nipetraka taminay isan-taona izy. Tsy tonga tamin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany fotsiny izy - niara-nipetraka taminay tamin'ny maha-olona azy nandritra ny androm-piainany. Niaraka taminay izy isaky ny tsingerintaona nahaterahany.
Koa satria Jesosy dia olombelona tanteraka sy Andriamanitra feno, dia fantatsika fa mahafantatra antsika tanteraka Izy. Fantany antsika ao ivelany; fantany ny dikan'ny hoe mahatsapa fanaintainana, hatsiaka ary noana, fa koa fifaliana eto an-tany. Namelona rivotra mitovy ihany izy, nandeha tamin'io tany io ihany, nanana vatana vatana mitovy aminay ihany. Ny fiainany tonga lafatra eto an-tany dia maodelin'ny fitiavana ny olon-drehetra ary mikarakara ny sahirana sy ny asa fanompoana an-driamanitra rehetra.
Ny vaovao tsara indrindra amin'ny tantara Krismasy dia izao: tonga i Jesosy amin'izao fotoana izao! Tsy voa maloto sy manaintaina intsony ny tongony satria ankalazaina ny vatany ankehitriny. Ny kiraron'ny hazofijaliana dia mbola eo; ny stigmata dia mariky ny fitiavany antsika. Ho an'ny finoantsika amin'ny maha-kristiana antsika sy ny iraka ataontsika eto amin'ny GCI / WKG, dia ilaintsika ny manana mpisolo vava sy solontena ao amin'i Jesôsy izay nateraka ho olombelona, ​​izay miaina toy ny olombelona ary maty tamin'ny maha-olombelona antsika mba hanavotra antsika. , Ny fitsanganany tamin'ny maty dia manome toky antsika fa hitsangana amin'ny maty ihany koa isika ary handray tsara ny fianakavian'Andriamanitra satria maty ho antsika izy.
Iray amin’ireo andalan-teny ao amin’ny Testamenta Taloha izay milaza mialoha ny nahaterahan’i Jesosy dia hita ao amin’ny Isaia 7,14: « Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, mitoe-jaza ny virijina ka hiteraka zazalahy, izay hataony hoe Imanoela. Ny hoe Imanoela dia teny hebreo ary midika hoe “Miaraka amintsika Andriamanitra”, izay mampahatsiahy antsika hoe iza i Jesosy. Izy no Andriamanitra nidina, Andriamanitra eto amintsika, Andriamanitra mahalala ny alahelontsika sy ny hafaliantsika.
Amiko ny fanomezana lehibe indrindra amin'izao Krismasy izao dia ny fampahatsiahivana fa tonga indray mandeha Jesosy fa tsy tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana fotsiny. Niaina toy ny olona toa ahy sy ianao. Maty olombelona Izy mba hananantsika fiainana mandrakizay amin’ny alalany. Tamin’ny alalan’ny fahatongavana ho nofo (incarnation) no niraisan’i Jesosy tamintsika. Lasa anisantsika izy mba ho ao amin’ny fianakavian’Andriamanitra miaraka aminy.
Io no fototry ny hafatra entintsika ao amin'ny Grace Communion International / WKG. Manantena isika satria manana an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, izay niaina teto an-tany tahaka antsika ankehitriny. Ny fiainany sy ny fampianarany dia manome antsika fitarihana, ary ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty no manome antsika famonjena. Miray saina isika satria ao isika. Raha manohana ara-bola ny GCI / WKG ianao, dia manohana ny fiparitahana izao filazantsara izao: avotra amin'Andriamanitra iray izay tia antsika tokoa isika ka nandefa ny zanany lahitokana ho teraka, olombelona velona, ​​ho antsika ho faty ny maty iharina hitsangana ka hanolotra fiainana vaovao ao isika. Izay no fototry ny vanim-potoana fankalazana ary ny antony hankalazantsika.
Manantena aho fa hiaraka aminay amin'ity volana ity ianao mba hahafahantsika miara-mankalaza izay asaina ataontsika tsy tapaka, izany hoe mifandray amin'ny Andriamanitra iray izay mahatakatra antsika. Ny nahaterahan'i Jesôsy no fotoam-pivavahana voalohany natolotry ny Noely, saingy mankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'i Kristy isika isan-taona satria mbola miaraka amintsika Izy. Ny Fanahiny Masina dia miaina amin'ny mpandimby azy rehetra. Miaraka amintsika foana Izy.
Mirary Krismasy sambatra ao amin'i Kristy ianao!